Xuquuqda Aadanaha LFI, ardayda waxay aqriyaan qeybaha ku habboon qoraalka qoraalada manhajka waxbarashada caadiga ah. Waxay sidoo kale wax ka bartaan taariikhda iyo suugaanta iyada oo loo adeegsado warbaahinta kaladuwan, khibradaha kala duwanaanta, fiidiyaha, safarada bulshada, iyo inbadan. Kadib markay ogaadaan dhacdooyinka muhiimka ah ee taariikhda, ardayda waxay ka wada hadlaan sida dhacdooyinkaas u saameeyaan noloshooda maanta, oo waxay wax ka akhriyaan dhacdooyinka hadda ka dhacaya Boston iyo adduunka oo dhan. Ardaydu waxay leeyihiin shaqo-guri habeen-habeen ah oo diiradda lagu saarayo dhismaha ereyada, waxayna soo saaraan hal qoraal ama mashruuc bil kasta ah.
Aasaaska xisaabta LFI
Layliska Xisaabaadka LFI waa koorso ardayda ku jirta barnaamijka 'For For Independence' si ay uga shaqeyso dhisida xirfadahooda xisaabta iyada oo loo maro ku celcelis iyo codsi. Ardayda waxay u shaqeeyaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen xirfadahooda xisaabeed ee shaqada ee xirfadaha lacagta, xisaabinta, dareenka tirada, iyo xallinta dhibaatada. Arday kasta oo fasalka ku jira wuxuu ku shaqeeyaa kobcinta xirfadahooda shaqsiyeed iyagoo adeegsanaya hawl maalmeedka.
Aasaaska Sayniska LFI
Barashada Madaxbanaanida Midaynta Sayniska Sayniska waxay sahamisaa jirka bini aadamka iyo xirfadaha nolol maalmeedka caafimaadka qaba. Ardaydu waxay sahamiyaan qaab dhismeedka lafaha, dheefshiidka, unugyada, iyo Nidaamka wareegga ee jirka bini aadamka. Ardeydu waxay haystaan qalab ku habboon qaabka ay wax u bartaan waxayna ka shaqeeyaan dhisidda xirfadahooda shaqsiyeed.
Sayniska Cuntada LFI
Isu diyaarinta waxbarashada dugsiga sare ka dambeeya iyo shaqaalayntu waa u muhiim dhammaan dhalinyarada. Sayniska Cuntada, ardayda LFI waxay ka shaqeeyaan inay horumariyaan madax-bannaanidooda. Waxay qorsheeyaan cunno toddobaadle ah, waxay ka dukaameystaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin, waxay si badbaado leh u shaqeeyaan si ay wax u karsadaan oo ay u diyaarsadaan cuntada, u gaarsiiyaan macallimiinta mushaarka leh, oo ay aruuriyaan faa'iidooyinka! Koorsadani waxay ka caawineysaa ardayda inay bartaan inay ammaan ku ahaadaan bulshada dhexdeeda iyo inay tixgeliyaan miisaaniyad markay wax adeeganayaan. Ardaydu waxay cunaan waxa ay kariyaan, waxay yareeyaan xulashada cuntada. Waxay sidoo kale wax ka bartaan xulashooyinka cunnooyinka caafimaadka leh waxayna ka helaan cunno xiiso badan dhaqamo badan.
Sayniska Cuntada LFI - Ardaydu waxay fursad u leeyihiin inay wax ku bartaan nafaqada, kooxaha cuntada, iyo inay fursad u helaan inay ku bartaan xirfadaha cuntooyinka. Cilmiga sayniska ardayda waxay sahamiyaan kooxo cunto oo kaladuwan (miro, caano, hilib .....), noocyada cuntada (borotiin, carbs, ....), iyo ilaha cuntada (dhirta, xoolaha). Dhammaan ardayda waxay fursad u leeyihiin inay ku celceliyaan xirfadaha nolosha oo ay isku dayaan cunnooyin kaladuwan oo kaladuwan.
Fasalka jimicsiga LFI-ga ayaa ardayda u oggolaanaya fursad ay ku jimicsadaan asxaabtooda. Ardaydu way ka qaybqaadan karaan nashaadaad kala duwan inta lagu gudda jiro fasalka.